Qala ishishini, Incorporate, MDL ukuPhuculwa kwezixhobo
Zonke izibonelelo ozidingayo ukuqala ishishini elitsha. Funda malunga nokubandakanya, ukwakheka kwe-LLC kunye nendlela onokuthi ufake ngayo kwangoko ukusebenzisa ishishini lesefu elidala. Fumana ulwazi oluluncedo malunga neentlobo zeshishini, izibonelelo zalo kunye nendlela yokusebenza ngokufanelekileyo kunye nokugcina ishishini ukukhulisa ukhuseleko lwamatyala. Senza iinkampani kuwo onke ama-50 aseMelika, eCanada nakwamanye amazwe aphesheya. Ezinye zezona zidume kakhulu Delaware LLC kwaye i I-Wyoming LLC.
Ukudibanisa okanye Yenza i-LLC ngoku, Fowuna 1-888-444-4812 Ulwazi lokuqalisa ishishini kunye neeNkonzo
Inkampani encinci yamatyala, okanye LLC sisakhiwo sombutho weshishini… (nceda ucofe ikhonkco)
The Umbutho Ngaba luhlobo lweshishini olwakhelwe igama ngenxa yokuba… (nceda ucofe ikhonkco)
Xa ubhalisa inkampani, Umbutho okanye uC Corp ngowona uqhelekileyo… (nceda ucofe ikhonkco)
Imibutho engenzi nzuzo zenzelwe ukuqhuba imisebenzi kwaye… (nceda ucofe ikhonkco)
A ubudlelwane obuncinci (LP) yenziwe yenye okanye ngaphezulu ngokubanzi… (nceda ucofe ikhonkco)
An I-LLLP yiNtsebenzo encinci yeTyala loNcedo oluMiselweyo. Nazi izibonelelo ezimbini ezikhulu zeli qumrhu, okanye sisakhiwo sombutho weshishini o ((nceda ucofe ikhonkco)
Iinkampani zeShelf ezalupheleyo - iiNkampani kunye neeMibutho yeeNkampani kunye neeNtengiso
Thelekisa iintlobo zeShishini
Inkampani eXananelwe uxanduva Inkampani
I-LLC vs S-Corporation
Uqala njani uMbutho ongajonganga kwenza nzuzo / iQumrhu - Inkcazo kunye neMizekelo
Ngaba ndifanele ukudibanisa?
Iinkampani zeShelf ezindala
Ngubani ofanele adibanise?